Whelping Bhokisi: Pfungwa, Zvirongwa uye Maitiro Ekuvaka - Hutano
Whelping Bhokisi: Pfungwa, Zvirongwa uye Maitiro Ekuvaka
Chii chinonzi Whelping Bhokisi?
Whelping Bhokisi Zvirongwa uye Pfungwa
Dhizaini yeiyo Whelping Bhokisi
Maitiro Ekuvaka iyo Whelping Bhokisi (DIY Gwara)
Matanho mana ekuvaka iyo Whelping Bhokisi
Kuedza uye Kushandisa Whelping Bhokisi
Kumuita Kuti Ajairane
Saka imbwa yako yakatenderedza mavhiki manomwe uchiita nhumbu; ari maari diestrus chikamu yekupisa kwake kutenderera. Tinofanira kutanga kufunga nezve iyo yekutsvaira kamuri uye whelping mabhokisi. Ngatitarisei kuti chii chinonzi whelping room uye chii chinofanira kunge chirimo.
Kubata pamuviri wembwa kunotora pakati pemazuva makumi mashanu nemasere nemakumi matanhatu nemashanu; dzakatenderedza mwedzi miviri kusvikira vana vaberekwa.
Imba inotonhodza ndipo apo imbwa yako ine nhumbu ichazvarira vana vayo . Inofanira kuve yakadzikama uye yakanyarara - kure kure nemigwagwa yakabatikana kuburikidza neimba. Imba yekudyira inowanzo kuve yakakwana. Amai vanoda kunzwa vakachengeteka; kuti hapana munhu achazovhiringidza kana kuunza kutyisidzira kumbwanana dzake.
Iwe unofanirwa kuwana kona yakanyarara yebhokisi rako. Bhokisi rino whelping ndipo panoberekera dhamu ; inzvimbo diki, yakachengeteka kune mbwanana dzake.
Iwe unogona kutenga huwandu hwemabhokisi ewhelping; kadhibhodhi, plastiki kana huni. Ivo vanowanzo tenderera 4ft x 4ft muhukuru nehurefu hwakatenderedza 2 tsoka - yakakwira zvakakwana kudzivirira vana vanopukunyuka.
Mbwanana dzinoramba dziri mubhokisi kazhinji kusvika panosvika mavhiki mana ezera; apa ndipo pavanozoita vapenyu uye nekudaro vanoda yakawanda nzvimbo yekutenderera. Izvi dzimwe nguva zvinogona kusiyanisa zvichienderana nerudzi rwembwa uye nekukura kwembwanana.
Sezvatakataura kuti bhokisi rinowanzo kuve rakatenderedza 4ft x 4ft nehurefu hwakatenderedza tsoka mbiri - izvi ndezvekuti vana vanogona kutiza.
Iko kunowanzo kuve nemusuwo / kubuda kune rumwe rutivi - izvi dzimwe nguva zvinogona kuva hafu yemusuwo kana musuwo wakazara, zvinoenderana nesaizi yaAmai. Inofanirwa kubvumidza kuwanikwa kuri nyore kwaAmai kudzoka nekudzoka kubva kuzvimbuzi zvemumba uye kumugarisa wakaderera mazamu mazamu .
Kana iwe wakamboona whelping bhokisi iwe unozoona njanji mukati mebhokisi; izvi zvinozivikanwa se pigrail . Iyi njanji inodzivirira Amai kubva pakupwanya vana vavo kumadziro ebhokisi. Mumabhokisi emapuranga inowanzova njanji yematanda, yakatenderedza 4 inches kubva pasi. Mumabhokisi epurasitiki inowanzo kuve yepombi yepurasitiki iyo yakaiswa pasi (funga ipurasitiki gutter pombi).
Kana amai vakatenderera panguva yekubata kana kuyamwisa, anorova njanji kana kupomba kwepurasitiki, achidzivirira chero mbwanana kuti isabatike mukona uye yakapwanyika.
Izvo zvinokwanisika kushandisa L-Shape epurasitiki trim zvakare - zvinongoda kuve nesimba zvakakwana kuti zvirege kukotama pasi pehuremu hwaAmai. Kazhinji, kubata trim inokwana kuti Amai vazvione uye vazvigadzirise; kuchengetedza vana vake vakachengeteka.
Iwe unogona kuvaka whelping bhokisi kubva pamakadhibhodi, mapurasitiki kana huni.
Kadhibhodhi Cheap uye Disposable Inotora nyore nyore fluid uye tsvina. Zvakaoma kuramba zvakachena kunze kwekunge mapurasitiki arongedzwa. Kwete kusimba sezvimwe zvinhu.
Plastiki Nyore kuchenesa, Hutsanana uye Yakasimba Inogona kuve inodhura zvishoma
Wood Yakasimba uye Zvirinani yakanakira mhando hombe Inotora fluid uye tsvina kunze kwekunge isina mvura uye Inorema kufamba.
Kune akati wandei ezvigadzirwa zvemabhokisi ekutsvedza. Nekudaro, iwo matatu akakosha magadzirirwo emitemo anogara akafanana:
Ita shuwa kuti iine nzvimbo yakakura zvakakwana kuti dhamu nembwanana dzayo (idiki 4 tsoka tsoka yepasi nzvimbo).
Ita shuwa kuti ine njanji nzira yekudzivirira amai kubva kukwenya vana vayo (kureva pigrail).
Ita shuwa kuti inogona kuwanikwa zviri nyore naAmai.
Mune rimwe remativi iwe waigadzirira yekupinda / yekubuda kwaAmai (iyo saizi yaizosiyana zvichienderana nesaizi yaAmai - rudzi rudiki rwaizoda mukova wezasi / kubuda).
Mamwe mabhokisi haana hwaro; izvi zvinowanzoitika kana iyo whelping kamuri ine tiles pasi sezvo zviri nyore kuchenesa. Kana iwe uri kuiisa yakanangana nematiles, ita shuwa kuti iwe une yakawanda yemapepanhau uye nemabhedha pasi kuti uvhare vana vadiki kubva pasi inotonhora pasi.
Ngatitarisei kuti ungavaka sei rako whelping bhokisi.
Model kuraswa whelping bhokisi
Gwara rinotevera rinoshanda nemazvo kukadhibhodi, mapurasitiki kana bhokisi rine huni. Nekudaro, isu takafunga kuvaka bhokisi rinoraswa rezvikonzero zvitatu zvinotevera:
Bvisa chero mukana wekushatiswa kwemarara
Dzokororazve / kurasa mushure mekushandisa
Dhamu redu raive rudzi rudiki
Shandisa zvayakanakira nezvayakaipira, yatakakurukura pamusoro, kuti ikubatsire kusarudza izvo zvinhu zvinokodzera iwe zvakanyanya. Kune mhando dzakakura, huni dzinogona kusimba uye kusimba. Pano isu tiri kushandisa modhi, saka ramba uchifunga kuti haisi kuyera.
1 x 4ft x 4ft base
4 x mativi kuyera 4ft x 2ft
4 x trims kana pombi / guttering yeiyo njanji
Kana iwe uri kuvaka repurasitiki whelping bhokisi iwe uchazoda :
4 x 2x4ft - Sheets epurasitiki (yakasimba uye haikotame, mapatya madziro akanaka)
1 x 4x4ft - Sheets epurasitiki (yakasimba uye haikotame, mapatya madziro akanaka)
1 x Yakanaka mhando yeplastiki glue
4 x 2ft kureba - Plastiki trim (90 ° L-Rakaumbwa)
4 x 4ft urefu hwakareba - Plastiki trim (90 ° L-Rakaumbwa)
3 x 4ft kureba - Rail inogona kushandisa plastiki kupomba / guttering kana L-Shape trim
Kana iwe uri kuvaka yehuni whelping bhokisi iwe uchazoda :
1 x 4x4ft yePlywood
4 x 2x4ft yePlywood
Kutuka kwehuni (3 x 4ft kureba)
Pimha uye cheka hurefu hwese hwaunoda. Kune rimwe remativi, cheka mukova / kubuda - saizi yeiyi inoenderana nerudzi rwaAmai (akakura zvakadii uye zvinoda kuti zvive zvakaderera sei kwaari kuti apinde nekubuda zviri nyore).
Kana uchishandisa plastiki, shandisa iyo 90 ° L-Shape trim kunama mativi pamwechete. Gira pamwe chete mukati memukati wetimu uye ubatanidze rumwe rutivi kune yega yega urefu hwechidzitiro (Kana uchishandisa huni, nzwara mativi pamwechete).
Batanidza chigadziko - zvakare uchishandisa trim kana uchishandisa plastiki - unogona kunama mucheka mukati kana kunze kwebhokisi kuti ukwane iwe. Rova mativi acho kuti ugadzire kana uchishandisa huni.
Batanidza njanji - kana uchishandisa plastiki, namatidza rumwe rutivi rwepurasitiki kudivi rebhokisi rinotenderera rakatenderedza 4 inches kubva pachigadziko. Kana ukashandisa huni, namatidza matusi ehuni kumativi ebhokisi akakomberedza 4 inches kubva pachigadziko. Usatombo kunetseka nezve kubatanidza njanji kune iro divi raunopinda / kubuda.
Iwe unogona zvakare kutarisa ichi vhidhiyo gwara .
Paunenge iwe wavaka bhokisi rako, nhanho yekutanga kushandisa whelping bhokisi kuita kuti rako dhamu rive rakasununguka paunenge uchishandisa ; anofanira kunzwa akachengeteka uye akasununguka.
Izvi zvinotanga nekamuri rako rekutsvaira. Rangarira kushandisa kwedu kutungamira pamusoro penzvimbo yekutandarira:
Yakavanzika uye Yakadzika Traffic Kamuri
Yakaiswa muNzvimbo Yekusatsigira
Bhokisi rekutsva rinofanira kuiswa mune yakasarudzika uye yakadzika traffic kamuri mumba mako (kureva kudzikama uye kunyarara pasina vana, mhuka, kana mufaro).
Inofanirwa kuiswa kumwe kunhu kwayakarerekera (kureva kuti hapana madhirezi, kupenya kwezuva rakajeka uye hapana chakananga kupisa sosi).
Paunenge iwe waisa bhokisi rekutsvaira mune yekutsvaira kamuri, usazvifambisa.
Dhamu rako risati razvara, iye aifanira kunge akashandisa (kureva kuzorora kana kurara) iro whelping bhokisi uye kunzwa akachengeteka uripo.
Iwe unofanirwa kuedza nekumukurudzira kurara mubhokisi mukati memavhiki mashoma apfuura asati aberekwa. Kana iye achizeza kushandisa iro bhokisi, rangarira kumashure kune ako mazuva ekushamwaridzana. Shandisa kusimbisa kwakanaka uye gadzira musangano wakanaka kwaari wekushandisa iro bhokisi. Izvi zvinogona kutora maitiro ekubata kana kurumbidza.
Sezvatareva, dhizaini yemabhokisi ewhelping anosiyana, saka usazvidya moyo zvakanyanya. Chinhu chakakosha ndechekuti chakakura zvakakwana kuna Amai nembwanana, uye iwe wakarangarira kubatanidza pigrail kudzivirira Amai kubva kupwanya vana vayo.
Muchidimbu, sarudza izvo zvinoenderana nebhajeti rako uye hunyanzvi hwe DIY, ita shuwa kuti ine mativi mana, hwaro, nzira yekubuda nekubuda uye pekupedzisira njanji yekuchengetedza vana vakachengeteka.
Kana iwe ukasarudza plastiki uye ucheke chero nguva, ita shuwa kuti pane akatsetseka mativi; unogona kubatanidza trim kana tepi.
Wakave wakavaka bhokisi rinotyisa kare uye une rimwe zano rekugovana nevaverengi vedu? Inzwa wakasununguka kupindura pazasi.
Hound yeAfghan Hound Inoburitsa Ongororo
Iyo Inotsanangurwa yeGerman Mufudzi Goridhe Retriever Sanganisa Nongedzo
mazita embwa akanakisa ekuvhima varume
golden retriver german shepard musanganiswa
alaskan husky mazita uye zvirevo